ဒီစကား - ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် - Lwintmgmg Daily News
လွင့်မောင်မောင် ၏ Diary
Reference Exchange Rate ( မြန်မာငွေ လဲနှုန်း)
Home » သူ့အမြင် » ဒီစကား - ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်
ဒီစကား - ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်
Written By လွင့်မောင်မောင် on Tuesday, May 5, 2015 | 8:29 PM
ဒီတပတ်မှာတော့ ဒီအချိန်မှာ အရေးကြီးပြီလို့ ထင်တဲ့ကိစ္စလေးတခု အကြောင်း ဆွေနွေးချင်ပါ တယ် ။ ယခုဆိုရင် ရွေးကောက်ပွဲတွေ ကျင်းပဖို့သတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်း ကျင်းပမယ်ဆိုရင် ( ၆ ) လသာ လိုပါတော့တယ် ။ နိုင်ငံရေးပါတီတွေကလည်း ရွေးကောက်ပွဲမှာ ဝင်ပြိုင်ဖို့အတွက် ပြင်ဆင်နေကြပါပြီ ။ ကျွန်မတို့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကလည်း ရွေးကောက်ပွဲဝင်ခဲ့ရင် အောင်နိုင်ဖို့အတွက် စီစဉ်ဆောင်ရွက်နေပါပြီ ။ ရွေးကောက်ပွဲဆိုတော့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကို ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းပါဘဲ ။ ဒီတော့ ကိုယ်စားလှယ် လောင်းတွေရွေးချယ်ရေးက တာဝန်ကြီးဖြစ်လာတာပေါ့ ။ '' တာဝန်ကြီး'' ဆိုတာ အဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ ခေါင်းဆောင်ပိုင်းရဲ့ အမြင်ပါ ။ ''အခွင့်အရေးကြီး'' လို့မြင်နေတဲ့သူတွေလည်း ရှိပါတယ် ။
ယခုကျွန်မတို့ကြားသိနေတဲ့ သတင်းတွေအရ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအဖြစ် အရွေး ခံချင်သူတွေ များနေတဲ့ကိစ္စနဲ့ အချို့ပါတီတွေဆိုရင် ရင်ဆိုင်နေရပါတယ် ။ ကျွန်မတို့ အမျိးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်လည်း ဒီစာရင်းထဲမှာပါပါတယ် ။ ဘာကြောင့်ဒီလောက်တောင် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဖြစ်ချင်ကြပါလိမ့်လို့ ကျွန်မ မစဉ်းစားဘဲ မနေနိုင်ပါဘူး ။ ကျွန်မ အတွက်တော့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် တာဝန်ယူရတာ အလုပ်နှစ်ဆတိုးသွားတဲ့ သဘော ရှိပါတယ် ။ တနေ့ တနေ့ရှိတဲ့နာရီပေါင်းကတော့ နှစ်ဆတိုးတာမဟုတ်တော့ အင်မတန် ဝန်ပိပါတယ် ။ ကျွန်မရေးဘူးပါတယ် ။ ရန်ကုန်နဲ့ နေပြည်တော်အကြား ကူးသန်းသွားလာ နေရတဲ့ ကိစ္စကိုကမနည်းတဲ့ ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးပါ ။ ပြည်သူ့ကိုယ်စားလှယ် တယောက်အဖြစ် အရွေးခံပြီးမှတော့ လွှတ်တော်လုပ်ငန်းတွေကို ဦးစားပေးဆောင်ရွက်ရတာကြောင့် ပါတီတာ ဝန်တွေပါ ကျေပြွန်စေဖို့ နားရက်မသတ်မှတ်ဘဲ အလုပ်လုပ်ရပါတယ် ။ အချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေက အလုပ်မရပ်မနားလုပ်တာကို ဂုဏ်ယူဝံ့ကြွားပါတယ် ။ ကျွန်မကတော့ အလုပ်လုပ်ချိန် အနား ယူချိန် မျှတတာက ပိုပြီးအရည်အသွေးမြင့်တဲ့ လုပ်ငန်းတွေကိုဖော်ဆောင်နိုင်စေတယ်လို့ ယုံကြည်တာကြောင့် စနေ တနင်္ဂနွေလောက်တော့ လုံးဝနားနိုင်အောင် ကြိုးစားပါတယ် ။ အောင်မြင်မှုကတော့ သိပ်မရှိဘူးလို့ ဝန်ခံရပါမယ် ။ လွှတ်တော်တာဝန် မဲဆန္ဒနယ်တာဝန် ပါတီတာဝန်တွေ အားလုံးကျေပြွန်ဖို့ရာ နားချိန်လျှော့ရပါတယ် ။ နားချိန်ဆိုတာက ရုပ်ပိုင်း ဆိုင်ရာအင်အားသာမက စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အင်အားပါဖြည့်ဖို့အတွက် အရေးပါပါတယ် ။ နိစ္စဓူဝအလုပ်တွေကြောင့် စာဖတ်ဖို့အချိန် အင်မတန် နည်းသွားရပါတယ် ။ အလုပ်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ စာရွက် စာတမ်း စာအုပ်တွေကို ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူး ။ ဒါတွေကတော့ တာဝန်အရ ဖတ်နေရတာပါပဲ ။ တွေးတော စဉ်းစားဖွယ်ရာ ဖြစ်စေတဲ့ ရသ သုတ စာပေတွေကို ပြောတာပါ ။
ခြုံငုံပြီးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဘဝဟာ မက်မောဖွယ် ရာလို့ ကျွန်မမမြင်ပါဘူး ။ ဒါဆိုဘာ့ကြောင့် ဒီလောက်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဖြစ်ချင် တာလဲ ။ ပြည်သူတွေအတွက် တတ်အားသ၍ လုပ်ဆောင်ပေးချင်လို့ပါလို့ ပြောကြပါ လိမ့်မယ် ။ ကျွန်မကတော့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ဘာ့ကြောင့်အရွေးခံတာလဲလို့ မေးရင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ မပြီးပြတ်သေးတဲ့ ဒီမိုကရေစီရရှိရေး ကြိုးပမ်းမှုကြီး ကို ဦးဆောင်ပြီး ဆက်လက်အကောင်အထည်ဖို့ဖြစ်ပါတယ် ။ ခိုင်မာတဲ့ ဒီမိုကရေစီစိတ်ဓါတ် နဲ့ ကျရာနေရာက တာဝန်ထမ်းဆောင်မယ်ဆိုတဲ့ ကျွန်မတို့ရဲဘော် ရဲဘက်တွေကိုလည်း ရွေးချယ်ပြီး (၂၀၁၂) ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာ ယှဉ်ပြိုင်စေခဲ့ပါတယ် ။ ယခုအချိန်မှာတော့ ဒီမိုကရေစီနဲ့ပါတီအတွက်မဟုတ်ဘဲ မိမိကိုယ်ကျိုးအတွက် ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ အတော်များနေတာ နိုင်ငံရေးပါတီများ အသိုင်းအဝိုင်းမှာ တွေ့ရပါတယ် ။
ဒီတော့ အစမှာ မေးခဲ့တဲ့ မေးခွန်းများကို ပြန်ကောက်ပါရစေ ။ ဘာ့ကြောင့် ကိုယ်စားလှယ် ဒီလောက်ဖြစ်ချင် နေကြတာလဲ ။
ကိုယ်စားလှယ်များရဲ့ အဆောင်အယောင် ရပိုင်ခွင့်တွေကို အားကျလို့လား ။ ဒီလကစပြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေ လစာတိုးရတာ မှန်ပါတယ် ။ ဒါပေမဲ့ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ကိုယ်စားလှယ်တွေကတော့ ပြည်သူ့အကျိုးပြုလုပ်ငန်းတွေ အတွက် ရံပုံငွေနဲ့အဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ရံပုံငွေတွေ လစဉ်ထည့်ရမှာမို့ မိမိတို့စရိတ်တွေကို ကာမိဖို့ပဲကျန်မှာပါ ။ ခေါင်းပေါင်းပြီး ရုပ်မြင်သံကြားမှာ မ်ိန့်ခွန်းပြောရတာကို အားကျသူတွေများ ရှိလားမသိပါဘူး ။ ဒါမှမဟုတ် ကိုယ်စားလှယ်များ နိုင်ငံခြား ခရီးသွားခွင့်ရတာ နိုင်ငံတော်အခမ်းအနားတွေကို တက်ခွင့်ရတာတွေကို အထင်ကြီးနေကြလားမသိပါဘူး ။ ဒီလိုစိတ်ထားတွေက ကိုယ်စား လှယ်ကောင်း တစ်ဦးပေါ်ထွန်းလာရေးအတွက် အထောက်အကူပြုမှာ မဟုတ်ပါဘူး ။ အဆိုး ဆုံးကတော့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဖြစ်လာရင် မိမိအကျိုးစီးပွား တိုးတက်ရေး အတွက် အခွင့်အရေးတွေ ပစ်ပြီးယူလိုက်မယ် ဆိုတဲ့ စိတ်ဓါတ်နဲ့ ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဖြစ်ချင်သူ တွေပါပဲ ။ နိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့ ပြည်သူများ သတိကြီးစွာနဲ့ ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကို မရွေးမိဖို့ လိုပါတယ် ။
ဒီတပတ်တော့ ဒီမျှသာ ။ ။
ဒီလှိုင်းစာစောင် အတွဲ (၄) အမှတ် (၁၆)
► 02/28 - 03/06 (53)
► 12/20 - 12/27 (86)
► 12/13 - 12/20 (75)
▼ 05/03 - 05/10 (89)
အသံဖိုင် နားထောင်ရန်နဲ့ ရယူရန် နားထောင်ရန် အသံဖိုင...
တိုက်ပွဲဖြစ်ဆဲ ၃ ဖွဲ့ အပစ်ရပ်ချုပ်ဆိုပွဲမှာ ပါဝင်မ...
အုပ်စုတက်ရေး အစွမ်းကုန်ကြိုးစားမည်ဟု မြန်မာယူ ၂၀ အ...
လူထုနှင့် ကေအန်ပီပီတပ်ဖွဲ့ တွေ့ဆုံရေး နေပြည်တော်စစ...
လားရှိုး ပေါက်ကွဲမှု ကလေး ၁ ဦးသေ၊ လူကြီး ၂ ဦး ဒဏ်ရ...
သျှမ်းဘာသာ အပါအဝင် တိုင်းရင်းသားဘာသာ ၈ မျိုး ဒီဗီဘ...
သစ်ခိုးမှုဖမ်းဆီးစဉ် အစိုးရနှင့်ကေအိုင်အေ တိုက်ပြွဲ...
အိန္ဒိယ သမုဒ္ဒရာအတွင်းရှိ Barrenကျွန်းမှ မီးတောင်တစ်...
ရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ထံ NLD နာယက စာပေးပို့
မကွေးတိုင်း ဒေသကြီး အတွင်းရှိ ကျေးရွာအများစုတွင်ေ...
သမ္မတဦးသိန်းစိန် နဲ့ ဝသပ ခေါင်းဆောင်တွေ တွေ့ဆုံ
တောင်ကြီးမှာ လုံခြုံရေးယူတဲ့ အဖွဲ့ကြောင့် မြို့ခံေ...
ကိုယ်ချင်းစာနာစိတ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ကြရန် ရဲချုပ်မြှာ...
မောတောင်ကို အထူးနယ်စပ်ဂိတ် အဖြစ် တိုးမြှင့်မည်
တနိုင်ငံလုံး အပစ်ရပ်ရေး အမြန်လက်ထိုးဖို့ သမ္မတ လိုလ...
ကချင်ဒေသတိုက်ပွဲ အစိုးရ စစ်လေယာဉ်နှစ်စင်း ပါဝင်တို...
KNPP တပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အား ၂ဝဝ လောက် ဖြတ်သန်းသွားလာခွင်...
ရုရှားဂြိုဟ်တု ကမ္ဘာမြေပေါ်ပြန်မကျမီ မီးလောင်ပျက်စီး...
ပါကစ္စတန်နှင့် စစ်ဘက်ဆက်ဆံရေး တိုးမြှင့်ရန် မြန်မာက...
သျှမ်း/မြောက် ဒုက္ခသည်များအတွက် နိပွန်ဖေါင်ဒေးရှင်း...
ယူကေ ရွေးကောက်ပွဲ ကွန်ဆာဗေးတစ် အနိုင်ရ
သူရ ဦးရွှေမန်း ပြော စကား ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကြိုဆိ...
မေ ၈ ရက်နေ့ ငွေလဲနှုန်း
ရခိုင်ပြည်နယ် ဂီရိမုန်တိုင်းဒေသ ရေရှား၍ ကျေးရွာလူထ...
လူထုဆွေးနွေးရေး စစ်ကြောင်းချီတက်မည့် လမ်းကြောင်း မ...
မန္တလေးတွင် တရားမ၀င်ကုန်သွယ်မှုမှ ကျောက်စိမ်းနှင့် က...
မြန်မာသင်္ဘောသားများပါသည့် ကုန်တင်သင်္ဘော အီရန် ပြန်လွှ...
သျှမ်းပြည်နယ်ကနေ ၀ တကယ်ခွဲထွက်တော့မှာလား
ရုရှားဂြိုဟ်တု မေ ၈ ရက်နေ့ ကမ္ဘာမြေပေါ် ပြန်ကျမည်
ကားနောက်ဖုံးတွင် တင်လာသည့် မြန်မာများကို ထိုင်းတော...
AA နှင့်ဆက်သွယ်မှုဖြင့် အဖမ်းခံရသူ ၂ဝ ရှိ
မေ ၇ ရက်နေ့ ငွေလဲနှုန်း
တောင်သမန်အင်းအတွင်း ငါးအမြောက်အမြား သေဆုံးမှုနှင့် ...
ဦးပိန် တံတားဘေး စားသောက်ဆိုင် ဖွင့်ခွင့်ပြုသော မြ...
မင်းအုပ်စိုးအမှုနှင့် ပတ်သက်၍ အစ်မဖြစ်သူအား တရားလို...
ထိုင်းသရုပ်ဆောင် မင်းသမီး ချူမ်းဖူး စေ့စပ်ပွဲ သတို...
မေ၀ယ်သာကို ဇနီးဟောင်းက တရားစွဲ
စစ်သွေးကြွများ လက်မှ ပြန်လည်ကယ်ဆယ်နိုင် ခဲ့သည့် အမ...
ခရီးသည်တင်ကား ပစ်ခတ်သူ တပ်မတော်သားကို အရေးယူအပြစ်ေ...
ဝေဟင်အတွင်း ဆီဖြည့်နိုင်ပြီဖြစ်သည့် မောင်းသူမဲ့လေယ...
မြန်မာအမျိုးသမီးအသင်းက မလေးရှားကို ၄ ဂိုးပြတ် အနို...
ချဲလ်ဆီးအသင်းနှင့် နည်းပြ မော်ရင်ဟုို စာချုပ်သစ် ထ...
အိုင်အက်စ်ခေါင်းဆောင် ၄ ဦး ဖမ်းမိရေး အမေရိကန် ဆုေ...
ထိုင်းက ရေလုပ်သားများကို အထောက်အထားလက်မှတ် လုပ်ပေး...
ထိုင်းဘုရင်မင်းမြတ် ကျန်းမာရေး ကောင်းမွန်လျှက်ရှိ
“၀” ပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးတပ် (UWSA) ခေါင်းဆောင် ဦ...
မကြာမီပြန်စမည့် လွှတ်တော်အစည်းအဝေးတွင် ဖွဲ့စည်းပုံအ...
မြိတ် ဘုရားကိုင်ချောင်း ကျောက်စီရန် ကျပ် သိန်း ၈၀၀...
နီပေါမှာ ကူးစက်ရောဂါ အန္တရာယ်တွေနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရ
တနင်္သာရီ - ရန်ကုန် ခရီးစဉ်ကို လေကြောင်း လိုင်း ၆ လိ...
စက်ရုံ ၁၇ ရုံကို မန်းစည်ပင် အပိတ်ခိုင်း
ကရင်ပြည်နယ်တွင်း စစ်တပ်ဗုံးကြဲမှု ရွာသားတွေထိတ်လန့်...
ကျောက်မီးသွေးသုံး ဓါတ်အားပေး စက်ရုံစီမံကိန်းကို ရေ...
စစ်အင်အားသုံးတဲ့မူကို ထိပ်သီးအစည်းအဝေးက အပြင်းအထန်...
ရန်ကုန်မြို့တွင်း အမြန်စီးတီးဘတ်စ်များ ပြေးဆွဲရန် ...
ကျောင်းသွားရန်ခက်ခဲသည့် ဒေသများမှ ကျောင်းသူကျောင်း...
စိုင်းစိုင်းနဲ့ ဒိတ်ဒိတ်ကြဲတို့ရဲ့ အမေရိကန်ခရီးစဉ်...
ဆူနာမီရေလှိုင်း သတိပေးချက် ထုတ်ပြန်
ထိုင်းတောင်ပိုင်း ဖန်ငခရိုင်တွင်း ရိုဟင်ဂျာအလောင်း...
တောင်ကြီးမှာ ပြောက်ကျားအင်္ကျီဝတ်အဖွဲ့ကို ကန့်ကွက်ရေး...
မင်းအုပ်စိုးအမှုနှင့် ပတ်သက်၍ လူတစ်ဦး သေဆုံးနိုင်သ...
ဖိလစ်ပိုင် နဲ့ အမေရိကန် မကျေနပ်ပွဲ စက်တင်ဘာလထဲ ပြ...
မြန်မာ့ပင်လယ်ပြင် ငါးဖမ်းခွင့် ၃ လကြာ ပထမဆုံးအကြိမ...
ယခုနှစ် လက်ကိုင်ဖုန်းမှတဆင့် မိုးကြိုးပစ်ခံရ၍သေဆုံ...
ရိုဟင်ဂျာအလောင်းမှာ နှိပ်စက်တဲ့ ဒဏ်ရာမတွေ့ရ
ကချင်တိုက်ပွဲ ကွင်းဆင်းလေ့လာရန် အစီအစဉ်ဖျက်သိမ်း
အထက်မြန်မာနိုင်ငံ အလုပ် ရှင်တွေက တစ်ရက်အနည်းဆုံး လ...
တရားမဝင်သတ္တုကျောက်များ သယ်ယူသည့် တရုတ်နိုင်ငံပိုင်...
ကိုးကန့်တပ်ဖွဲ့သတင်းမထုတ်ရန် စစ်တပ် သတိပေး
မင်းပြားမြို့နယ်မှ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး တစ်ဦးအပါအ၀င် ...
တစ်ကျော့ပြန် အသက်ဝင်လာတဲ့ ထားဝယ်စီမံကိန်းက အိမ်ရှင...
ကချင်ပြည်နယ်တွင် မူးယစ်ဆေးသုံးစွဲသူ ၉၀ ခန့်ကို ဖမ်...
ချီလီတောင်ပိုင်း မီးတောင်ပြာကြောင့် သောက်သုံးရေ ဓာ...
မေ၀ယ်သာနှင့် ပတ်ကွီရိုပွဲ ထိုးခဲ့သည့် လက်သီးချက် အ...
ပြေတီဦးနဲ့အိန္ဒြာကျော်ဇင်တို့ရဲ့ အလှူပွဲ တစ်သက်တစ်ခ...
► 04/26 - 05/03 (111)
► 04/19 - 04/26 (119)
► 2014 (2075)
► 06/15 - 06/22 (94)
► 11/10 - 11/17 (117)
► 10/27 - 11/03 (138)
► 10/20 - 10/27 (189)
► 10/13 - 10/20 (200)
► 10/06 - 10/13 (225)
► 09/29 - 10/06 (241)
► 09/22 - 09/29 (107)
► 09/15 - 09/22 (108)
► 06/23 - 06/30 (106)
► 06/09 - 06/16 (123)
► 05/12 - 05/19 (151)
► 2012 (4491)
► 11/11 - 11/18 (77)
► 10/14 - 10/21 (94)
► 10/07 - 10/14 (123)
► 09/30 - 10/07 (140)
► 09/09 - 09/16 (141)
► 09/02 - 09/09 (173)
► 08/19 - 08/26 (145)
► 08/12 - 08/19 (132)
► 08/05 - 08/12 (184)
► 07/22 - 07/29 (128)
► 07/15 - 07/22 (185)
► 07/08 - 07/15 (166)
► 07/01 - 07/08 (118)
► 06/24 - 07/01 (188)
► 06/10 - 06/17 (162)
► 06/03 - 06/10 (170)
► 05/27 - 06/03 (142)
► 05/20 - 05/27 (127)
► 05/06 - 05/13 (87)
email တွင်ဖတ်ရန် သင့် Mail ကိုရိုက်ထည့်ပါ
Zawgyi Unicode Font
ထားဝယ်မြို့ဆန်းချီ အ-မ-က မြတ်ဆရာပူဇော်ပွဲ
Mandalay FM Live Radio
Icecast Server & Icecast Hosting
လွင့်မောင်မောင်၏ ဒိုင်ယာရီ စာမျက်နှာများ
(ဟာဂျူလီ - ကသာ) ကွယ်လွန် - ဘန်ကောက်မြို့NCIဆေးရုံမှာဆေးကုသမှုခံယူနေရင်းဘန်ကောက်စံ တော်ချိန်နံနက်၅နာရီမှာသူချစ်တဲ့ ပြည်သူတွေနဲ့ချစ်တဲ့မိသားစုကိုခွဲခွါသွားပါပြီ … Myo Aye မြင့်လွင်
အရူးလို့ခေါ်ပါ - အရူးလို့ခေါ်ပါ ❤◦.¸¸. ◦✿ သခင့််ရဲ့ကျောက်စိုင်အသည်းကလာတဲ့ သံမဏိဆုံးဖြတ်ချက်ကို ပျော့စေချင်လွန်းလို့ မီးခြစ်ဆံမီးနဲ့အပူပေးမိတယ်။ ဒီလိုဆိုံအရူးလို့ခေါ်လိ...
Party Girls TV -
LWINT MG MG | Movies , Videos and Music
"နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးထင်ကျော် ကျန်းမာရေးအရ ရာထူးကနုတ်ထွက်"
ဘင်္ဂလာဒေ့ရ်ှမှပြန်ဝင်လာမည့် ဘင်္ဂလီများအား ပြန်လည်လက်ခံရန်အတွက် ယာယီလက်ခံရေးစခန်းများသို့ လ၀က အရာရှိများ စတင်ထွက်ခွာ
စာအုပ်များ အခမဲ့ ဖတ်ရှုရန်အတွက် Website ၁၈ ခု ။။။
ဗီဇပြောင်းလဲမှု အဆင့် ၁၄ ရှိ ဆေးမတိုးသည့် HIV ပိုးသစ်ကို မြန်မာလူမျိုး ထရပ်ကားမောင်းသူထံတွင် စစ်ဆေးတွေ့ရှိ
စာရေးဆရာ မေတ္တာရှင်(ရွှေပြည်သာ)၏ ရဟန်းဘ၀မှစွန့်လွှတ်ခြင်းဆိုင်ရာဖြေရှင်းချက်များအား တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း
ကိုဘာနီမြို့မှာ ကာ့ဒ်တွေ အသာစီး ရလာ
Memory Card ထဲက ဖျက်လိုက်မိတာတွေကို ပြန်ယူနည်း
Copyright © 2011. Lwintmgmg Daily News - All Rights Reserved